Farmaajo Oo Xalay Ku dhawaaqay dagaal ka dhan Ah Murashaxiinta – XAMAR POST
KGS oo soo Magacaawday Xeer ilaaliye Cusub.
DEG DEG:- Wasiirka Cusub ee Amniga oo qoyska Ikraan Tahliil u fasaxay in ay dhigan karaan Banaanbax
DEG DEG:- Liiska Musharraxiinta Aqalka sare ee Gobolada Waqooyi oo la soo saaray.
DEG DEG:- Dalka Suudaan oo ka badbaaday Isku day Afgambi!
Taliyihii Nisa Fahad yaasiin oo Muqdisho soo gaaray
DEG DEG:- Madaxweynaha Hirshabelle oo caawa joowhar kula kulmay Sentaradii ku soo baxay doorashadii jowjar ka dhacday
DEG DEG:- Wasiirka Cusub ee Amniga oo qoyska Ikraan Tahliil u fasaxay in ay dhigan…
Farmaajo Oo Xalay Ku dhawaaqay dagaal ka dhan Ah Murashaxiinta
By Mohamed Abdi On Apr 29, 2021
Madaxweyne farmaajo ayaa xalay Villa Soomaaliya ku qaabilay Koox dhalinyaro ah oo dhawaan Banaanbax nabadeed ka dhigay Muqdisho iyagoo watay Marooyin cad cad.
Qof ka mid ah dhalinyaradii ka qeyb gashay kulankaasi ayaa sheegay in ay Madaxweyne Farmaajo usheegeen walaaca ay ka qabaan in Caasimada xilligaan dagaalo marti geliso balse ay kala kulmeen waxyaabo aysan filaneyn sida ay sheegeen.
HALKAAN HOOSE KA AKHRISO WIXII KASOO BAXAY KULANKII XALAY
Markaan la wadaagnay aragtideenii ahayd xaaladda cakirran magaalada muqdisho kajirta Md. Farmaajo ee iskugu jirta qax, barakac, bur bur dhaqaale & qarka inuu saaranyahay dowladnimada curdunka ah si aysan taasi u dhicin baan la wadaagnay inuu ka baaqsado wax walba oo colaad hurin karta af & adin isla markaana dhiniciisa ka qaato dib u laabashada wada hadalka& dalka inuu aado doorasho, kadib markaan intaas la wadaagnay waxuu noogu jawaabay sida hoose :
Dagaal inaan laga baaqsan karin, si aan usoo celino nabadda & xasillinta waxaa naga go’an inaan u isticmaalno awood oo aan ciidanka howlgalino, waxaan haysanaa ciidan aad u badan dagaal gali kara, leh tababar fiican, tayo& niyad wanaagsan leh.
Ciidanka naga soo horjeedo, anaa ah Taliyaha ciidanka qalabka sida, cidwalba oo kasoo horjeedsato awaamirta ciidanka waa qowlaysato & maleeshiyaad .
Madax hore ayaa ka shaqayneysa hurinta colaado ayagoo raadinaya kursi siyaasi ah.
Wuxuu tibaaxay inay ciidanka dhanka mucaaradka kasoo jeedsaday ay yihiin maleeyshiyo una adeegaya dano shisheeyo .
Waxaan isu daynay inaan dalka u jihayno doorasho ku salaysan qof iyo cod ah, waa nalaga horyimid , waan la qaadanay doorasho dadban iyadoo la fulinaayo heshiiskii 17 Sep,2020 iyadiina shuurdo & caqabada horleh ayaa nalaga hor yimid, waxaa talladii qaatay baarlamaanka oo soo jeediyay muddo kordhin 2 sano ah si aan u gaarsiino dalka doorasho qof& cod ah iyadiina waa nalaga hor yimid, hada waxaan dib ugu laabanay doorasho dadban.
Wuxuu tibaaxay inuu doorasho dadban aadayo wallow uu u muuqday nin rabo inuu sii joogo xukunka.
Waxaan aad uga xumahay in xilligaan loo laabto odayaal dhaqameed, xasbunallaah waxaasi waxaa ka shaqayaayo oo qabyaalad ah dad dalkaan madax kasoo noqday.
Ethiopia, maanta waxaa jira isbadal dhanka siyaasadda ah oo waxaan la leenahay xiriir fiican, shalay siyaasadeena waxaa gacanta ku haysay Ethiopia iyadoo colaado & dagaalo hurinaysa ayay hadana siyaasadeena hogaanka u haysay qofwalboo madax noqda waxaa uu iska soo daahirin jiray Ethipia, maanta xariir fiican baan la leenahay.
Kenya, waxa waa dal aan cadow nahnay waligeed anaga unbay nagu hoos nooleyd waxay diidantahay inaan dowlad awood leh helno si aan taas loo gaarin waxay adeegsanaysaa dowlad goboleedyo& siyaasiyiin si ay ula wareegto badeena, una sii haysato dhaqaalaha ay naga hesho , sababtoo ah soomaali badan ayaa maalgashatay Kenya hadii awood yeelano dadkeena dalkeena kusoo laabanayaan.
UAE, waxay wadaa fara gallin , waad aragtaan waxay kawado Yemen sidaas& si kadaran ayay dalkeena ka rabtaa inay kadhigto oo ay na hogaamiso.
Jabuuti, waa dal yar oo aan walaalo nahnay , ma doonayso inuu dalka sii xasiloonaado, waxay rabtaa inaan sidaasi kusii jirno oo dano dhaqaale& inay siyaasadeena hogaamiso ayay rabtaa , waan uga tanaasulnay kursigii qaramada midoobayd waxaana u yeelnay inay walaalaheen yihiin.
Qollooyinka xallane jooga waxay rabaan dhaqaalaha ay na siiyaan inay nagu guumeystaan oo aan aqbalno siyaaasadooda marwalbana nagu dhex jiraan anaga ma rabno in wax naloo meersho, waxaad ogtihiin qollada xallene joogto gaaladda ah inay baddeena soo galiyeen kudhawaad 900 maraakiib&doonyo waxayna sanadkii ka sameeyaan lacag kabadan 1bilyan dollar.
Hanaan dhiska siyaasadda , State building
Waxaan rabnaa inaan dhisno dowlad dhaxe awood leh , oo aan awoodo halkaan maamul goboleedyada kasiino.
Waxaan samaynay hay’ado asaas u ah dowladnimada sida garsoor madax banana & hay’addala dagaalka musuq maasuqa.
Hadalka ayuu dib noogu soo celshay.
Waxaan u sheegnay magaalada laga qaxay , dadkii aysan haysan hooy& cunto oo ay maanta maciin bidayaan goobo alshabaab ku xoogan yihiin, annaga caawa kula joogno ma awoodi karno inaan meelahaas u qaxno, shaqooyinka aan hayno ayaan u dakanownay oo waaba nala wada gowracaa.
Sidee u dhici kartaa askari shalay mushaar qaatay waa maleeyshiyo
Dalka waa inuu aadaa doorasho si xasilooni u imaato.
Nabadoonimada aad caawa&marwalba sheegtid kaama muuqato hadal xanaf& dagaal baad kujirtaa .
Wax la aqbali karo ma ahan askari furin kujiray shalay oo alshabaab la dagaalmayay inaad dhahdid waa maleeshiyaad.
Magaalo cid lagaga adkaan karto majirto kaliya waxa wax lagu heli karo waa un waan
24 Qof Tahriibayaal ahaa oo doon ay la socdeen la degtay Xeebaha..
Dhageyso: Waare Oo Talo ujeediyey Farmaajo si uu isku bad baadiyo
Mohamed Abdi Sep 21, 2021
DEG DEG:- Madaxweynaha Hirshabelle oo caawa joowhar kula kulmay…
Rooble oo kulan deg deg ah la qaatay Guddoomiyaha Aqalka Sare,…
DEG DEG:- Ra’iisul Wasaaraha XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay…
DEG DEG Agaasimihii hore ee hay’adda Sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji…
DEG DEG- Beesha Caalamka oo kubaaqay in Deg deg uxaliyaan…
DEG DEG- Xildhibaan Mahad Salaad”Dalkaaga iyo dadkaaga…
Prev Next 1 of 1,821